MW CMC Oo Eebe Uga mahadceliyay Raxmada Kacuratay DDSI Iyo Shir Kabineetka Maamulada Gobolada Iyo Degmooyinku Yeelan doonaan - Cakaara News
MW CMC Oo Eebe Uga mahadceliyay Raxmada Kacuratay DDSI Iyo Shir Kabineetka Maamulada Gobolada Iyo Degmooyinku Yeelan doonaan
Adhisababa (Cakaaranews) Axad, 17ka April 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa si wayn eebe uga mahadceliyay raxmada roobka Guga ee guud ahaanba kacuratay deegaanka isagoo sheegay in raxmadaas ilaahay looga mahadnaqo laguna xasuusto abaarihii ina soo maray looguna shukriyo ilaahay raxmada iyo abaarahaba labadaba sida diinteena islaamku ina farayso.
Dhanka kalana waxaa 14ka bishan Miyaziya oo dhinaca kale kubeegan 22ka bishan April 2016 GC magaalada jigjiga gaar ahaan xafiiska madaxwaynaha kafurmi doono ‘‘hadii alle idmo’’ shir aad muhiim u ah oo taariikhi ah. Shirkaas oo ay kasoo qaybgali doonaan kabineetka maamulada gobolada, degmooyinka, madax xafiiseedyada biyaha iyo kuwa maaliyadaha ee heer degmo.
Hadaba ajandayaasha shirka lagaga wada hadli doono ayaa waxaa kamid ah: qiimaynta iyo kalasaarida biyo-xidheenadii ay degmooyinka DDSI sameeyeen iyadoo laga eegi doono dhanka tayada iyo awooda ay uleeyihiin inay biyo aad u badan kaydin karaan iyo in kale. Waxaana laga cabiri doonaa dhinacyada balaca, dhererka, baaxada, goobta laga xushay, biyaha haatan galay inta ay le,eg yihiin iyo waliba sida loo tashiilay miisaaniyadii kubaxday si loo helo biyo-xidheenada ugu fiican. Waxaa intaa dheer oo xooga lasaari doonaa si loo kalasaaro degmooyinka shaqeeyay iyo kuwa aan shaqaynin: goobta laga sameeyay biyo-xidheenka iyo wakhtiga uu hayn karo biyaha gala’’.
Waxaa kale oo ajandayaasha shirka kamid noqon doona: sidii loo gaadhsiin lahaa ama xoolo loogu ururin lahaa dadkii shacabka gobolka sitti ee ay abaaruhu caydheeyeen ama xoolihii kaga dhamaadeen abaarihii. Si loogu soo celiyo rajadoodii nololeed.
Sidoo kale, Waxaa shirka lagu eegi doonaa jihooyinka qorshaha horumarineed ee xukuumada DDSI sanadka 2009TI.
Iskusoo wada duuboo, madaxwaynaha DDSi mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa aad usoo dhaweeyay natiijada lataaban karo ee katimid biyo-xidheenada ay degmooyinku sameeyeen mudo gaaban gudaheed.